Mudane Abdirashid Hassan Mataan oo iska casilay xilkii iyo xubinnimadii xisbiga Waddani. Sababtu maxay tahay? | Awdalpress.com
Mudane Abdirashid Hassan Mataan oo iska casilay xilkii iyo xubinnimadii xisbiga Waddani. Sababtu maxay tahay?
Waxa Daabacay staff-reporter on Aug 5th, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Awdalpress – London – Muddo ku dhaw sannadba, waxa la hadal hayey in siyaasiga Abdirashid Hassan Mataan oo ahaa xoghayaha Warfaafinta Waddani iyo hoggaanka sare ee xisbigaasi aanay wada socon. Waxana sidaa markhaati ka ahaa Abdirashid oo aan muddaba ka soo dhex muuqan shirarka iyo kulammada hoggaanka sare ee xisbiga Waddani.
Abdirashid waxa uu hore uga diga rogtay xisbiga UCID oo uu u ahaa musharraxa M/xigeen. Kadibna, waxa uu ku biiray xisbiga Waddani ee uu maanta iska casilay, isaga oo beddelay Boobe Yusuf Ducaale oo wakhtigaa iska casilay xilkii Warfaafinta ee uu u hayey xisbiga Waddani.
Dhinaca kale waxa uu Abdirashid ka mid ahaa siyaasiyiintii codkooda siiyey musharraxa M/xigeenka Waddani Mudane Mohamed Ali Aw Abdi, oo xilligaa uu Mohamed Ali ka cabsi qabay in uu Abdirashid la tartami doono. Culayskiisii uu Abdirashid la garab istaagay Mohamed Ali-na waxa uu ahaa mid miisaankiisa leh. Laakiin maantu waa maalin kale, siyaasadduna waa mid mar walba is laba rogta.
Si kastaba arrini ha ahaatee, waxa aan shaki ku jirin in marka hoos loogu dhaadhaco xisbiga Waddani, ay jiraan xubno maamulka xisbiga isa siiyey, oo iska horkeenaya xisbiga iyo dadka miisaanka leh, ee xisbiga meel gaadhsiin lahaa. Gudo iyo dibadna, haddii aan wax weyn laga beddelin hannaanka ololaha xisbiga waxa soo socota dil-dillaac weyn oo ku yimaadda xisbiga Waddani.
Ka saxaafad ahaanna waxa aan ka war qabnaa, wakhtigan oo la soo gaadhay ololihii xisbiyada, in ay jirto kala hororsi iyo maamul kala jiidasho ka dhex jira golayaasha xisbiga Waddani uu ku leeyahay qurbaha iyo gudaha Somalilandba. Taasina, waxa ay fogeyneysaa siyaasiyiin, waxgarad iyo saxafiyiin wax badan ka tari lahaa isku soo jiidka shacabka taageera xisbiga Waddani. Kuwaasi oo muddaba ka yaabbanaa sida ay wax u socdaan.
Dhaqankaa keenay kala fogaanshaha ee ku cusub xisbiga Waddani dhexdiisa, ee ka dhex dillaacay xisbiga iyo tallaabadan uu maanta Abdirashid ku dhaqaaqay, horena uu Boobe ugu kacay, waxa ay fursad weyn siinaysaa xisbiga Kulmiye iyo UCID ee tartanka ku jira. Oo baryahanba aad looga gacan sarreeyey. Sida loogu soo qul qulay xisbiga Waddanina waa mid isna la fili karo in looga qul-qulo.
Gobollada galbeedka oo ah kuwo dihin, cudud weyna leh, oo muddaba u egaa in ay taageerayaan xisbiga Waddani ayaa walaahow badani ka dhex jiraa xilligan, gaar ahaan jiidaha qurbaha. Halka uu xisbiga Kulmiye geed dheer iyo ku gaabanba u fuulay in uu hanto mudanka reer Somaliland ee dibadda ku nool. Laakiin siyaasiyiinta gobollada dhexe iyo barigu waxa ay xilliyadan danbe u egaayeen kuwo ay taageeradoodu isugu biyo shubteen dhinaca xisbiga Waddani. Shacabkuse weli waxa ay isha ku hayaan shaashadaha iyo qaabka maamul ee xisbiyadu u socdaan. Habase ahaatee, haddii ay gobollada barigu arkaan tallaabooyin taban oo siyaasiyiinta iyo aqoon yahannada miisaanka leh galbeedka Somaliland u qaadeen dhinaca taban, waxa aan shaki ku jirin in ay saamayn doonto gobol kasta oo Somaliland ku yaalla.
This post has been viewed 10815 times.